राजनीतिक स्थिरता चाहिन्छ। चाहिने भनेको प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति नै हो। तर आर्थिक क्रांति नबुझेका हरुले संविधान लेखे। मधेसी क्रांति ३ को न्यायपूर्ण निष्कर्ष बिना राजनीतिक स्थिरता आउँदैन। भारतीय पूँजी देश पस्ने नै मधेसको बाटो हो। विश्व पूँजी देश पस्ने भारत को बाटो हो। संविधान स्वागत नगर्ने निर्णय भारत को हो, अमेरिका र संयुक्त राष्ट्र संघ ले भारत ले जे गर्यो त्यही गर्छ। किनभने भारत विश्व शक्ति हो। अमेरिका लाई भारत को जरुरत विश्व को कुना कुनामा छ। ईरान मा अमेरिका ले गर्न नसक्ने भारत ले सक्छ। भारत त्यो देश हो। जब कि अमेरिका को विदेश नीति को सबैभन्दा जटिल मुद्दा नै आज इरान हो। राजनीतिक समस्या को राजनीतिक समाधान खोज, आफै खोज --- भारत सरकार ले नेपाल सरकार लाई भनेको त्यति मात्र होइन? आफ्नो आंग को भैंसी नदेख्ने। चीन लाई भारत को जरुरत छ। लिपुलेक मा चीनले देखाइदियो त नेपाल लाई। यो चीन र भारत जुधाउने नसोंच, तिम्रो औकात छैन भनेर चीन र भारत ले मिलेर भन्दिए। जग्गा त के हो र? भारत ले जति लियो त्यति नै अर्को ठाउँ मा दियो। लैंड स्वाप भयो। मानसरोवर पुग्नु छ भारत लाई। नेपाल ले कर्णाली मा राजमार्ग बनाउन चाहँदैन त -- के गर्ने?
नेपाल मा ४०,००० मेगावाट विजुली उत्पादन गर्न चाहिने पैसा/पूँजी अहिले छ विश्व बाजार सँग। पूँजी को अभाव छैन। त्यो पूँजी न आएको नेपालको थर्ड क्लास राजनीति ले गर्दा। होइन भने नेपाल ले खोला र सुरक्षा बाहेक केही नदिने आधारमा १०-२० हजार मेगावाट का लागि अहिले नै एक दुई वर्ष भित्र मा सम्झौता हरु गर्न सक्छ। भारत र विश्व ले रोकेको छैन। नेपाल आफ्नो दुश्मन आफै हो। नेपाल को पोलिटिकल क्लास ले बाधा डालेको छ।
Baburam Bhattarai ck raut gurkha soldiers hydroelectricity Madhesh madhesi madhesi kranti3Modi Narendra Modi Nepal nepal hydroelectricity